learn | Saturngod
Don’t copy the code when you learn
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged learn on January 31, 2013 by saturngod. CodeAcedamy
13 Replies အခုမှ programming ကို စသင်မယ်။ ဘာကို စလေ့လာသင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ စလုံးရေစဖို့ ပြင်နေတဲ့သူတွေအတွက်က အသိချင်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ C++ ကနေ စသင်စေချင်တယ်။ Why C++ !!! လို့ ဆိုရင်တော့ ရှင်းပါတယ်။ အခြေခံ အကျဆုံးနဲ့ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် သုံးနေဆဲ language မို့ပါပဲ။ programming စလေ့လာဖို့ ပြင်တဲ့ သူတွေ မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းရှိတယ်။ ဘယ် language က မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ သင့်တော်မလဲ။ ဘယ် language က အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိမလဲ။ PHP တို့ ASP.NET တို့ကကော internet မရှိပဲ ရေးလို့ရလား။ web server တွေလိုတယ်လို့ ကြားတယ်။ စသည်… စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့။ စစဉ်းစားရမှာက ငါ တကယ်လုပ်ချင်ရဲ့လားဆိုတာကိုပါ။ programming ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးချိန်မှာ သူများတွေ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတယ် နောက်ပြီး Programmer ကြီး ဆိုပြီး အထင်ကြီးစရာထင်တတ်ကြပါတယ်။ Programmer နဲ့ Developer ကွာပါတယ်။ Developing လုပ်တာနဲ့ Progrmming လုပ်တာကလည်း ကွာပါတယ်။ ဒါတွေက နောက်ပိုင်း သိလာမှာပါ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged C++, learn, programming on March 20, 2010 by saturngod. Search for: